Yuusuf Indha-cadde oo la sii daayey, laguna eedeeyey in uu qarsoodi ku soo galay Ugandha. – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2009 12:00 b 0
Kampala, Oct 07 – Dawladda Ugandha ayaa shaaca ka qaatay in ay xorriyaddiisii u soo celisay Shiikh Yuusuf Siyaad ?Indha-cadde? oo ah wasiiru-dawlaha gaashaan-dhigga ee dawladda KMG ah ee Soomaaliya, kaasi oo shalay ciidanka ammaanka ee dalkaasi ay qabteen.
Shiikh Indha-cadde, ayaa shalay galabtii laga qabtay bartamaha magaalada Kampala ee xarunta dalka Ugandha isagoo saaran gaari nin kale oo Soomaali ahi uu ku waday, kadib markii ciidanka nabad-galyadu ay ka shakiyeen wasiiru-dawlaha oo dalkaasi lug ku galay, isagoo ka soo tallaabay xudduudda wadankaasi uu la wadaago dalka Kenya.
Dawladda Ugandha ayaa ku eedaysay Indhaca-cadde in uu si dhuumaalaysi ah oo aan sharci ahayn ku soo galay dalkeeda, taasina ay keentay in xabsiga loo taxaabo su?aalana laga weydiiyo sababto uu halkaasi u tagay.
Wasiiru-dawlaha waxaa uu xirnaa muddo ka badan 16 sacadood, waxaana lagu hayey xarun ay leeyihiin ciidanka sirdoonku sida laga soo xigtay qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee dalkaasi, waxaana su?aalo laga weydiiyey habkii uu ku soo galay dalka iyo ujeedadiisii inkastoo aysan wali dawladdu faah-faahin dheeraad ah bixin.
Sarkaal u hadlay ciidanka ammaanka ayaa sheegay xarigga wasiirku in uu ku soo beegmay xilli si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada Kampala taas oo lagu sababeeyey dabaal-degga xorriyadda dalkaasi iyo shirar mmuhiim ah oo halkaasi ka socda.
Indha-cadde hadda waxaa uu ku sugan-yahay safaaradda Soomaalida ee dalka Ugandha, waxaana safiirku uu sheegay xaaladdiisu in ay aad u wanaagsan-tahay isla markaana intii la hayey si wanaagsan loola macaamilay.
Ma cadde sababta rasmiga ah ee dhalisay Shiikh Indha-cadde oo ah wasiiru-dawlaha gaashaan-dhigga dawladda Shiikh Shariif, in uu hab qarsoodi ah ku galo dalka Ugandha oo ay Soomaaliya saaxiibo yihiin.
Yuusuf Indha-Cadde oo lagu xiray Ugandha, iyo dadaal lagu siidaynayo oo hadda socda.